जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण कार्यदल गठन गरी कार्यबिधि बनाएर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल सो अस्पताल हेर्दै आउनुभएकी डा. शान्ति भूर्तेलका अनुसार आज अस्पतालमा दुई जना चितवन र दुई जना नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पूर्व)का संक्रमित रहेका छन् । भूर्तेलले नयाँ ठाउँ भएकाले अझै केही कुराहरु सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताए । यद्यपि छुट्टै अस्पताल भएकाले भरतपुर अस्पतालमा संक्रमित राख्नु नपर्दा अन्य बिरामीको सहज उपचार गर्न पाइएको बताए ।
स्वास्थ्य कार्यालय नवलपरासीका प्रमुख केशव चापागाईंले भरतपुरमा कोरोना अस्पताल स्थापना भएकै कारण सहज भएको बताए । प्रादेशीक हिसावले बिरामीहरु पठाउने ठाउँ पोखरा भए पनि भौगोलिक हिसाबले चितवन धेरै सहज भएको बताउनुभयो । नवलपरासीमा सघन उपचार कक्ष र भेन्टीलेटरहरु छैनन् ।
भरतपुर अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. श्रीराम तिवारीका अनुसार नेपाल सरकारले तह एक अर्थात साधारण लक्षण भएका बिरामी राख्न सोही अस्पताललाई तोकेको छ । तह दुई अर्थात मध्यम र जटिललाई भरतपुर अस्पताल र कडा भएकालाई, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र वीपि कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान तोकेको तिवारी बताउँछन् ।
भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको सक्रियतामा कोरोना अस्पताल स्थापना भएकै कारण आज दुवै जिल्लाका संक्रमित राख्ने ठाउँ बनेको बताए । महानगरको दुरदर्शी सोचका कारण भरतपुर अस्पतालमा संक्रमित राख्नु नपरेको उनको भनाइ छ । अधिकारीले गरिबको उपचार गर्ने भरतपुर अस्पतालमा अहिले संक्रमित राख्नु नपर्दा चितवन र छिमेकी जिल्लाका बिरामीको उपचारमा सहज बनेको बताए ।
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले नेपालमा कोरोना देखिना साथ समस्या आउन सक्ने भएकाले सबैको साथ र सहयोगबाट कोरोना अस्पतालको स्थापना गरिएको बताए । उनले नेपालमा नै पहिलोपटक छुट्टै कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहारण भरतपुर महानगरले दिएको बताए ।
भरतपुर कोरोना विशेष अस्थाई अस्पताल